पौस महिना तपाईको लागि कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् पौस महिनाको मासिक राशिफल ! – PathivaraOnline
Home > राशिफल > पौस महिना तपाईको लागि कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् पौस महिनाको मासिक राशिफल !
admin December 12, 2018 राशिफल	0
पौस १ गते बिहानको ९ बजेर २२ मिनेटमा सूर्य धनु प्रवेशमा प्रवेश गर्दैछ। सूर्य धनु राशिमा प्रवेश गरेसँगै पौस शुरु हुनेछ। सूर्य धनु राशिमा एक महिनासम्म रहंदा सम्पूर्ण राशिलाई व्यापाक प्रभाव पर्नेछ। सूर्य राशि परिवर्तनको कारण कुन राशिलाई कस्तो फल मिल्छ हेर्नुहोस् ।
सूर्य गोचरको कारण मेष राशि हुनेहरुलाई धनहानि मिल्न सक्ला। झूटा आरोपहरूको कारण, प्रतिष्ठा ध्वस्त हुनेछ। काममा विफलता हासिल हुन सक्ला। असामान्य वातावरण पारिवारिक विवादको कारण हुनेछ। स्वास्थ्य पनि खासै राम्रो नहुन सक्ला।
सूर्य गोचरको कारण वृष राशि हुनेहरुले विवादको कारणले समस्या सामना गर्नुपर्नेछ। सरकारी र कानुनी रुपबाट कार्यहरु प्रभावित हुनेछन्। मान-प्रतिष्ठामा पनि आंच आउन सक्ला। आर्थिक रुपमा खर्च पनि बढ्नेछ।
सूर्य गोचरको कारण दाम्पत्य जीवनमा नकारात्मक असर देखा पर्नेछ। हरेक कार्यमा विफलता हासिल हुनेछ। धनहानि एवं मानहानिको कारण चिन्ता पैदा हुन सक्ला। शारीरिक कष्टमा पनि वृद्धि हुनेछ।
सूर्य गोचरको कारण कर्कट राशि हुनेहरुमा उर्जा बढ्न सक्ला। रोकिएको कार्य पनि सुरु हुनेछ। शत्रुहरू पराजित हुनेछन्। सरकारी क्षेत्रमा उल्लेख्य लाभ मिल्न सक्ला। स्वास्थ्यमा पनि सुधार हुनेछ।
सिंह राशि हुनेहरुलाई सूर्य गोचरले मानसिक चिन्ता थप्न सक्ने देखिन्छ। यात्रा गर्नको लागि अवरोध खडा हुनेछन् भने सवारी देखि पनि सावधान रहनु उचित हुनेछ । पारिवारिक समस्या बढ्नेछ। आर्थिक रुपमा भने समय सामान्य रहन सक्ला।
सूर्य गोचरको कारण कन्या राशि हुनेहरुले सावधान रहनु पर्नेछ। आर्थिक कार्य गर्दा पारिवारिक सहयोग लिनु उचित हुनेछ। स्वास्थ्यले भने राम्रै साथ दिन सक्ला। निर्णय लिँदा केहि असहज हुने भएता पनि समाजमा भने मान-प्रतिष्ठा मिल्नेछ।
सूर्य गोचरको कारण तुला राशि हुनेहरुलाई राम्रै फाइदा पुग्नेछ। व्यापार र व्यवसायमा भनेको जस्तै लाभ मिल्न सक्ला। पदोन्नति पनि प्राप्त हुनेछ। उच्च पद प्राप्त हुनाले उर्जा थपिनेछ। शत्रुहरू माथि विजय प्राप्त हुन सक्ला।
सूर्य धनु राशिमा गोचर हुँदा धनु राशिलाई कष्ट मिल्ने देखिन्छ। आदर र सम्मानमा कमि हुन सक्ला। मानसिक अशांतिको कारण कार्यहरु प्रभावित हुनेछन्। आँखाको समस्याले सताउनेछ। आर्थिक कार्य गर्दा पनि समय रहनु उचित हुनेछ।
आजको दिन तपाईको लागि मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। आज तपाईको परिवारसँगको समय राम्रोसँग व्यतित रहने देखिन्छ। आज तपाईलाई परिवारबाट सहयोग पनि राम्रो मिल्ने देखिन्छ। तर समाजमा भने तपाईको सम्मान घटेर जाने देखिन्छ। आज तपाईलाई धार्मिक क्षत्रमा पनि खासै लाभ नमिल्ना सक्ला। राजनीतिक कार्यबाट पनि तपाई टाढा रहनु होला।
सूर्य गोचरको कारण मकर राशि हुनेहरुको स्थान परिवर्तन हुन सक्छ। व्यवसाय अथवा जागिरको लागि यात्रा हुन सक्ला। आफ्नो गोपनियताको धायं नदिँदा दुख मिल्नेछ। आर्थिक रुपमा समय सामान्य हुने भएता पनि स्वास्थ्यमा भने सुधार हुन सक्ला।
सूर्य गोचरको कारण कुम्भ राशि हुनेहरुलाई धेरै धन लाभ मिल्नेछ। नउठेको रकम पनि उठ्न सक्ला। प्रेम सम्बन्धमा पनि केहि सुधार देखा पर्न सक्ला। आफू माथि लागेको लान्सना गलत सावित गर्नको लागि बाटो मिल्नेछ।
सूर्य गोचरको कारण मीन राशि हुनेहरुको जीवनमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन हुन सक्ला। भौतिक रुपमा मात्र नभई आध्यात्मिक रुपमा पनि समय परिवर्तित हुनेछ। उपहार प्राप्त हुन सक्ला। साथै स्वास्थ्यमा पनि सुधार हुनेछ।
ब्वाइफ्रेण्डसँग लुकीलुकी कार्यक्रममा पुगेकी साम्राज्ञीलाई मिडियाले पछ्याएरै भगाए (भिडियो)
०७५ पौष २३ गते सोमबार ई. सं. २०१९ जनवरी ०७ तारिख, हेर्नुहोस राशि अनुसार तपाईंको भाग्य